यस्ता पनि प्रेमी जसले आफ्नै गर्लफ्रेण्ड विक्रिमा राखे, करोडौंको बोली लाग्यो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एजेन्सी । गर्लफ्रेण्ड ब्वायफ्रेण्ड मन मिले नजिक मन नमिले ब्रेकअप सामान्य कुरा हो । तर एक जना युवकले भने आफ्नी गर्लफ्रेण्डलाई कराइरहने भएकाले बिक्रीमा राखेका छन् त्यो पनि सेकेन्ड ह्याण्ड सामान पाइने साइटमा ।
एकपटक प्रयोग भैसकेका सामानहरुको खरीद बिक्री हुने अनलाइन प्लेटफर्म इ बेमार्फत् ३४ वर्षका डेल लिक्सले आफ्नी ३७ वर्षकी गर्लफ्रेण्ड केली ग्रिभ्सलाई बिक्रीमा राखेका हुन् ।
बेलायतको एसेक्समा बस्ने लिक्सले इबेमा गर्लफ्रेण्डलाई बिक्रिमा राख्दै लेखेका थिए, ‘खरीद गरिसकेपछि तपाइँले यो चिज प्रयोग भैसकेको हो भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ ।’
लिक्सले केही कामै नलाग्ने तर निरन्तर कराइरहने खालको रहेको भन्दै गर्लफ्रेण्ड बाहिरबाट जति राम्रो भएपनि भित्र चाहीँ च्यातिएको उल्लेख गरेका छन् । साथै पछिल्लो भाग चुहिरहने र टाल्नै नसकिने खालको रहेको भन्दै केलीलाई निकै निच देखाउन खोजेका छन् ।
इबेमा गर्लफ्रेण्डलाई बिक्रिमा राखेसँगै मानिसहरु केलीलाई लगालग उच्च बोली लगाउन थाले । २४ घण्टामै ८१ हजार भ्यूज प्राप्त गर्नुका साथै १ सय भन्दा धेरैले बोली लगाए र ७० हजार २ सय डलर सम्मको बोली लाग्यो । केलीलाई इबेमा ७० हजार पाउण्डको बोली लागेपछि गर्लफ्रेण्डलाई तल्लो स्तरमा झार्ने लिक्सको योजना तुहिएको छ ।
केहीले भने खरिद गर्नुपूर्व एकपटक चिज परीक्षण गर्न चाहेको पनि बताएका छन् भने केही यसअघि कतिजनाले वस्तु प्रयोग गरिसकेको भनी प्रश्न गरेका छन् ।
उनले गर्लफ्रेण्डलाई जानकारी दिएरै हसिमजाकमा इबेमा त्यस्तो विज्ञापन राखेका थिए । तर यो हसिमजाक धेरै समय टिकेन । २४ घण्टाभित्रै इबेले मानिस तथा मानव अंगको किनबेच गर्न नपाइने भन्दै उसले उक्त विज्ञापनमा बन्देज लगाएको हो । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जताततैबाट उनकी गर्लफ्रेण्ड खरीद गर्न चाहनेको धुइरो नै लागेको थियो ।